बैंकमा रोजगारी : स्मार्ट कर्मचारी कसरी बन्ने ? – Banking Khabar
बैंकमा रोजगारी : स्मार्ट कर्मचारी कसरी बन्ने ?
बैंकिङ खबर । सामान्य अर्थमा रुपैयाँ, पैसा तथा साख सम्बन्धी कारोबार गर्ने कानुनद्धारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थालाई बैंक भनिन्छ । बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्विकार गर्दछ र सर्वसाधारणको माग अनुरुप भुक्तानी गर्नुको साथै उनीहरुको माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दछ ।
सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राखिदिनुका साथै बैंकले किसान, व्यापारी, उद्यमी एवं सर्वसाधारणलाई कर्जा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले बैंक जनताको एउटा विश्वासिलो र भरपर्दो संस्थाको रुपमा परिचित छ । बैंक यस्तो संस्था हो जसलाई सीसाको घर पनि भनिन्छ । जहाँ जोखिमको मात्रा बढी हुने गर्दछ । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु इमान्दार र नैतिकवान हुनुपर्छ । इमान्दार र नैतिकवान् मात्र होइन योग्य तथा दक्ष जनशक्तिलाई छनोट गर्नु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणहरुको लगानी तथा निक्षेप बढी हुने भएकाले वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । साथै, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमा विश्वसनियता हुनु जरुरी छ ।
बैंकका कर्मचारीमा निम्नलिखित गुण हुन जरुरी छ :
बैंकमा पछिल्लो समय नयाँनयाँ प्रविधिहरु भित्रिरहेका छन् । बैंकमा प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरदेखि लिएर हरेक कुरामा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा बैंकका कर्मचारी पनि यस विषयमा जागरुक हुनुपर्छ । त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ नीतिहरु एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेछ्यका विषयमा पनि जानकार रहनुपर्छ ।